रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना : १ वर्षभित्रै ४.८ मेवा विद्युत् | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना : १ वर्षभित्रै ४.८ मेवा विद्युत्
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना : १ वर्षभित्रै ४.८ मेवा विद्युत्
धनगढी । प्रदेश नं. ७ को पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट १ वर्षभित्रै ४ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न अहिले टर्वाइन निर्माणको काम भइरहेको छ ।
एउटै प्याकेजबाट १ वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक काम थालिएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ । कैलाली जिल्लाको पथरैया गाविसको कटासेनजिकै नहरबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको हो । आयोजनाको मुहान निर्माणको काम सकिइसकेको छ । उनका अनुसार आयोजनाको भौतिकतर्फको ६६ प्रतिशत प्रगति भएको र त्यसका लागि रू. ८ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ ।
सिँचाइ आयोजनाको प्रमुख पूर्वाधार मानिने इण्टेक निर्माण लक्ष्यअनुसार नै साढे २ वर्षभित्र सम्पन्न भएकोे आयोजनाले बताएको छ । कर्णाली नदीमा अवस्थित उक्त आयोजना इण्टेकको निर्माण कार्य सकिएपछि १ सय घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले पानीको बहाव परिवर्तन भएको आयोजनाका महर्जनले बताए । पानी बहावका दृष्टिले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको इण्टेकको २ सय मिटरको मुख्य नहरसहितको निर्माण कार्य रू. १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा भएको हो ।
पथरियादेखि कान्द्राखोलासम्म थप १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन विस्तृत सर्वे गर्न परामर्शदाता छनोट १ साताभित्रै गरिने आयोजनाले बताएको छ । जिल्लाको टीकापुर नपासहित पथरैया, दुर्गाैली, कान्द्रा, पथरिया, जानकीनगर, प्रतापपुुर, धनसिंहपुर, नारायणपुर, बलिया र मुनुवाका गरी कुल ३८ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजनाको निर्माण थालिएको हो ।
आव २०६४/६५ मा शुरू भएको सो आयोजना आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनामा विश्व बैङ्कको ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारको ५० लाख अमेरिकी डलर र उपभोक्ताको १० लाख अमेरिकी डलर लगानी रहने आयोजना कार्यालयले बताएको छ ।
विश्व बैङ्कको सहयोगमध्ये ५५ प्रतिशत अनुदान र ४५ प्रतिशत ऋणका रूपमा रहने र उपभोक्ताको अधिकांश रकम श्रमदान र परिचालनबाट पूर्ति गरिनेछ । कर्णाली नदीको पश्चिमी भँगालो झरही नालामा आधारित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली खासगरी १ सय वर्षअघि थारू समुदायको प्रयासबाट थालनी भएको मानिन्छ । आयोजनाको दोस्रो चरणमा जिल्लाको मध्यक्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसअन्तर्गत जिल्लाको ४० हजार हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।